4 Warbixinada Istuudiyaha YouTube ee Faa'iidada leh ee Aanad ka heli doonin Google Ads | BehMaster
Bogga ugu weyn/YouTube/4 Warbixinta Istuudiyaha YouTube ee Faa'iidada leh ee Aanad ka heli doonin Xayeysiiska Google
Xayeysiiska Google wuxuu horey u lahaa tiirar aad u isticmaali karto si aad dib ugu eegto waxqabadka ololayaashaaga fiidyaha. In kasta oo tiirarkan la dhisay ay had iyo jeer waxtar leeyihiin, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay kaliya macluumaad dheeraad ah. Tani waa halka uu YouTube Studio si aad ah u caawin karo. Falanqaynta YouTube Studio waxay ku siin kartaa xog aad u badan oo ku saabsan sida daawadayaasha dabiiciga ah iyo kuwa lacagta leh ay ula falgalaan fiidyahaaga YouTube.
Waxaa jira warbixino badan oo ku jira qalabkan oo aynaan ka helin gudaha Google Ads. Markaa mar kasta oo aan ka shaqaynayo koontada socodsiisa ololeyaasha fiidyaha ee Google Ads, waxaan uga baahanahay macaamiishayda inay i siiyaan gelitaanka Channel Analytics si aan u helo macluumaad dheeraad ah si aan u gaadho go'aamo wanagsanaan ka wanaagsan. Qormadan, waxaan ku soo qaadan doonaa afar keliya oo ka mid ah warbixinnada aan aadka u eego.
Daqiiqado muhiim ah
Fiidiyeyaasha la soo jeediyey
Waxaan ku tusi doonaa sida loo jiido warbixinada iyo sidoo kale sida aad u isticmaali karto si aad u horumariso waxqabadkaaga xayaysiimaha fiidyaha.
1. Isticmaal warbixinta "nooca aaladda" si aad uga fogaato xogta marin habaabinta ah
Isla markiiba waxaa laga yaabaa inaad ku fekereyso, "Waxaan mar hore ka heli karnaa macluumaadka qalabka gudaha Xayeysiiska Google. Tani maaha wax cusub." Iyadoo taasi run tahay, YouTube Studio Channel Analytics waxay sheegi kartaa sawir weyn. Halkan waxaa ah hal aragti oo ku saabsan xogta bilowga ah ee aan ka helno tab nooca aaladda.
Marka la eego saddexda tiir ee caadiga ah ee la soo bandhigay, Kombiyuutarrada iyo qaybaha telefoonka gacanta ayaa helaya inta badan wakhtiga daawashada. TV-ga iyo consoles-yada ciyaarta, si kastaba ha ahaatee, waxay helayaan celcelis celcelis ahaan muddada daawashada. Waqti badan oo daawasho ah ayaa macnaheedu noqon karaa ka qaybqaadasho wanaagsan, marka waxa laga yaabaa inaad dareento inaad u sii riixdo qalabkaas.
Laakiin tani dhab ahaantii ma ahan dhaqaaq sax ah. Guji badhanka buluugga iyo caddaanka ah ee "plus" si aad ugu darto "kadhka dhagsiga," iyo "Boqolkiiba celceliska la arkay."
Hadda waxaan arki karnaa sheeko kale. Iyadoo celceliska muddada daawashada ay u dheer tahay TV-ga iyo console-ka ciyaarta, aaladahaani waxay leeyihiin eber dhagsiin ah. Tani waa sababtoo ah Aaladaha TV-ga iyo console-ka ciyaarta ma tusi doonaan kaadhadhkaaga. Haddii aad wado ololaha sahaminta TrueView, waxa aad bixin doontaa kharashyada daawashada fiidyaha inkasta oo aanay beddelmin. Ilaa aad sidoo kale ku dadaalayso wacyigelinta ama ka qaybgalka fiidyowga, cabbirada aragtidani waxay soo jeedinaysaa inaad ololahaaga ku socodsiiso oo keliya Kombuyuutar ama taleefannada gacanta.
2. Isticmaal warbixinta "Ilaha Dibadda" si aad u abuurto Dhagaystayaal Gaar ah
Warbixinta Ilaha Traffic, waxaad sii wadi kartaa si aad u eegto halka uu taraafikadaada muqaalka ka yimid. Midka ugu horreeya ee aan jeclahay in aan eego waa ilaha Dibadda. Ilahan tixraacku waxa ay noqonayaan meelayn ka baxsan YouTube. Waa kan hal tusaale.
Waxaan aragnaa ilo caadi ah sida Facebook iyo LinkedIn. Ilaha la caadaystay waa goobo dhab ah, oo loo qariyay sirta macmiilka. Haddii shabakadaha kale ama baloogyada kale ay wadaagayaan macluumaadkaaga fiidyaha (si sahlan marka aad dadka u ogolaato inay dhejiyaan fiidiyowyadaada), waxaan arki karnaa halka fiidiyowga lagu wadaagay. Haddii aad haysato liis badan oo ku filan oo ilo tixraac ah, waxaad u isticmaali kartaa liiskan siyaabo kala duwan.
Qaado liiska ilaha Dibadda oo arag haddii aad u isticmaali karto sida meelaynta la maareeyey ee lagu beegsanayo ololayaashaada Bandhig.
U isticmaal liiska ilaha Dibadda ee Dhagaystayaal Gaarka ah si aad u hesho ololeyaal kala duwan oo muujinaya, Fiidyow, ama Sahan.
Run ahaantii maahan mid caadi ah, laakiin ka jawaab su'aalaha Quora adigoo isticmaalaya fiidyowga kanaalkaaga ee ku dhex jira jawaabaha. Waxaad markaa bilaabi kartaa inaad dhisto isticmaalayaasha fiidyaha ee fiidiyooyo gaar ah si aad ugu isticmaasho ololaha dib-u-suuqgeynta mustaqbalka ee ilo la isku halleyn karo.
3. Isticmaal warbixinta "Xilliga Muhiimka ah" si aad u aqoonsato muuqaalka ugu fiican ololahaaga
Aaggan waxaan ugu horrayn u isticmaalaa ololayaasha daahfurka TrueView kuwaas oo noqday qaabka ololaha YouTube-ka ee aan ugu jeclahay sababo badan dartood. Ololaha daahfurka TrueView, waxaad isticmaalayaasha u diraysaa bogga daawashada fiidyaha. Fikradayda, haddii aan bixinayo aragtidaas wakhti kasta, waxaan rabaa in aan hubiyo in isticmaaluhu uu ku lug yeesho fiidiyowga ilaa inta suurtogalka ah. Anigoo taas maskaxda ku haya, waxaan had iyo jeer ku tiirsanaa warbixinta daqiiqadaha muhiimka ah si aan u baadho muuqaalka ugu fiican ama aan u ogaado sida loo hagaajiyo xayeysiistayda fiidyaha ee daahfurka TrueView.
Daqiiqado muhiim ah ayaa muujin doona qaybaha muhiimka ah ee fiidyahaaga gaar ahaan iyadoo lagu saleynayo hab-dhaqanka daawadayaasha sida:
Qaybaha joogtada ah halkaasoo inta badan daawadayaasha aysan ka tagin
Qaybo leh xajmiyo xajin dhegeyste ah
Qaybo leh dib u haynta dhagaystayaasha.
Markaad tirooyinkan ku eegto fiidiyoo kasta, waxaad si fiican u fahmi doontaa daqiiqadaha fiidyaha ee laga yaabo inay u baahan yihiin horumarin. Tani waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad qorsheyso sida loo qaabeeyo fiidiyowyada mustaqbalka si aad ugu faa'iidaysato lacagtaada haddii aad go'aansato inaad ku xayeysiiso helitaanka TrueView.
4. U isticmaal warbixinta "fiidyaha la soo jeediyay" fikradaha meelaynta cusub
Mid ka mid ah ra'yiga aan ugu jeclahay YouTube istuudiyaha Channel Analytics waa warbixinta fiidyaha ee la soo jeediyay. Warbixintaan sidoo kale waxay hoos timaadaa Ilaha Gaadiidka. Kadib dhagsii isha Fiidiyowga Lasoo jeediyay. Asal ahaan waxa warbixintani ku tusi doonta waa fiidiyooyo laga soo qaaday kanaalada kale kuwaas oo taraafik u soo diraya fiidyahaaga kanaalkaaga YouTube. Waa kan tusaale waxa aan ula jeedo adeegsiga xogta kanaalka aan kula ordayo qoraaga kale ee WordStream, Michelle Morgan.
Cinwaannada fiidyaha ee aad ku aragtaan sawirka kore ma ahan fiidiyowyadeenna. Fiidiyowyadayada organic-ga ah waxay u muuqdeen sidii xulashooyinka lagu taliyey ee cinwaannada fiidyaha ee aan ku aragno warbixintan. Markaa hadda waxaan weydiin karnaa su'aasha, "Sidee tani u caawin kartaa ololayaashayada Google Ads?"
Iyada oo ku xidhan tiirka muhiimka kuu ah, waxaad bilaabi kartaa ururinta liis fikrado meelayn cusub si aad u tijaabiso ololahaaga fiidyaha. Haddii ay jiraan fiidiyowyo kanaalada kale si joogto ah u soo diraya taraafig leh waqtiyo daawasho dheer ama celceliska muddada daawashada sare, tixgeli in aad beegsato fiidiyowyadaas gaarka ah ama kanaalka oo dhan xayeysiisyada.
Sidoo kale xusuusnow inaad sidoo kale muujin karto xayeysiisyada Fiidyaha YouTube. Xitaa haddii aadan haysan fiidyowga hal-abuurka leh ee lagu socodsiiyo ololayaasha YouTube, waxaad weli isku dayi kartaa inaad dhigato Xayeysiiskaaga Bandhigga meelaynta fiidyaha ee ugu sarreeya ama kanaalada. Fiidiyowyada la soo jeediyay ka warbixi tallaal. Waxaad ka heli kartaa ilo cusub oo weyn oo lagu dhisayo wacyiga daawadayaasha horay loo caddeeyey inay xiiseynayaan macluumaadkaaga.
Isticmaal warbixinnadan istuudiyaha YouTube si aad u sii horumariso ololahaaga fiidyaha
Tiirarka aan ka helno Google Ads ayaa wali qiimo leh oo wali muhiim ah, laakiin YouTube Studio waxa ay bixisaa lakab qoto dheer. Way fududahay inaad hoos ugu dhaadhacdo godka bakaylaha xogta ee Falanqaynta Channel-ka, laakiin waxaan rajeyneynaa in boostadani ay ku siisay fikrado aad ku tixgeliso xisaabtaada. Isku day oo arag sawirka weyn ee waxa dhab ahaantii shaqaynaya (ama aan shaqaynayn) ee ololahaaga fiidyaha si aad u gaadho go'aan xog ogaal ah oo ku saabsan sida ololahaaga fiidyaha loo hagaajinayo.
Sida loo beddelo username Moj app?
Sida loo soo dejiyo Opera GX browserka beta ee iPhone iyo iPad
Miyay tahay in ganacsigaygu ku jiro TikTok? Su'aalahaaga Gubanaya ayaa laga jawaabay
Sida Loo Sameeyo Goob Xubinimo Oo Leh Nuxurka Xaddidan Pro